Siciid Deni oo hadal kulul ku weeraray Saraakiisha Ciidamada PSF
HomeWararka SomaliyaSiciid Deni oo hadal kulul ku weeraray Saraakiisha Ciidamada PSF
December 1, 2021 Wararka Somaliya, Puntland, Wararka Maanta 0
Xilli weli Magaalada Boosaaso ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay xilka qaadistii Agaasimaha Ciidamada Hay’adda PSF ayaa Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxaa uu weerar afka ah ku qaaday Saraakiisha Ciidamada PSF.
Deni oo socdaal ku maraya degaano ka tirsan Gobolka Nigaal ayaa sheegay in dalkan uu yeelanayo Ciidan balse uusan yeelaneyn Ciidan rag leeyihiin, hadalkaas oo u muuqda mid uu ku durayo Saraakiisha Ciidamada PSF-ta Puntland oo Maalmihii la soo dhaafay uu khilaaf kala dhaxeeyay.
Sidoo kale wuxuu sheegay in laga daba tagayo wixii qaldan si loo saxo balse aysan aqbaleyn dowlado isku dhexjira iyo dakhli dad gaar ah iska aruursadaan taasina ay ka hortageen, isla markaana Ciidamo rag gaar ah leeyihiin soo geba-gabeynteeda ay socoto.
Ugu dambeyn wuxuu sheegay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni in talada uu kusoo celiyay Bulshada kunool degaannada Puntland si ay Madaxdooda qof iyo cod ugu doortaan.
Hadalkan kasoo yeeray Madaxweynaha Puntland ayaa kusoo aadaya xilli ay xoogeysatay xiisada u dhaxeeysa Ciidamada PSF & Madaxweyne Deni, isla markaana Xukuumadda Puntland ay Ciidamo kusii daad gureyneyso.
Sweden oo ku Dhawaaqday Sharciyo Cusub oo ku aadan Dadka Safarka ka imaanaya